Software Popular – Android – Page 8 – Vessoft
Software Popular – Android – Page 8
العربية, English, Українська, Français... Tumblr 3.8.4.2
Network Bulshada Codsiga rasmiga ah ee shabakadda bulsho caan ah si ay u daabacaan iyo blogs ku arkaan. Sidoo kale software ka taageertaa loo maqli karo iyo is-dhaafsiga ee files kala duwan ee warbaahinta iyo diiwaanka qoraalka.
العربية, English, Українська, Français... Microsoft PowerPoint 16.0.6131.1008
العربية, English, Français, Español... Castle TD 1.6.3
Games Istaraatijiyad Arcade ee style ee Tower Difaaca. In ciyaarta waxaa jira noocyo kala duwan oo badan oo xoogeeyey munaarado, iyo wuxuush leh sharaxaad faahfaahsan oo ay u dhisaan ilaalinta ugu hufan.
English, Deutsch, 中文, Русский... Voice Changer 3.1.11
Qaar kale waxay Qalab ayaa habboon in la badalo codka. Software wuxuu isticmaalaa saamaynta badan si loogu badalo fariimaha codka oo ay jirto awood ay ku dhigay file ka badbaadiyay sida ringtone ah.
العربية, English, Українська, Français... GO Launcher EX 1.12
Desktop Software ee design interface ka mid ah qalab ka la isticmaalayo ayaa qarbeddada kala duwan. Software waxay leedahay qalab ay u astaysto smoothness ee animation, ayna ka mid ah widgets iyo size of Roobka shaashadda.
العربية, English, Українська, Français... TripAdvisor 12.2.1
Maps Codsiga waxaa la tiro badan oo ka mid ah talooyinka iyo dib u eegista Rakaabkii qorshaynta safarka adduunka oo dhan ah. Software wuxuu bixiyaa macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan nooca gaadiidka u caga safarka iyo fasaxa.
العربية, English, Українська, Français... Kik 8.8.1.2261
Chat Tababaraha dhamaystiran in ay is dhaafsadaan fariimaha qoraalka ah ee u dhexeeya dadka isticmaala. Software ayaa awood u ku xidhiidhiyaa CHAT group basaasa ka kooban warbaahinta kala duwan.
العربية, English, Français, Español... eBay 2.3.0.25
English, Français, Español, Deutsch... Microsoft Word 16.0.6131.1008
العربية, English, Українська, Français... FBReader 2.5.7
Akhristayaasha E-buugga Si sahlan ay u isticmaalaan software inay akhriyaan buugaagta elektarooniga ah qaabab kala duwan. Software ayaa u saamaxaaya in ay maareeyaan oo ku kala soocaan buugaagta by qaybaha ay maktabadda u gaar ah.
العربية, English, Français, Español... Audible 2.3.1
Network Bulshada software ah in baahiyey video Streaming ee network ka qalab camera ama dhirtuba idaacado kale oo caalamka ah.